काहूँडाँडाको प्रबद्र्धन गर्नका लागी तेस्रो काँहु धरहरा महोत्सव | Jukson
काहूँडाँडाको प्रबद्र्धन गर्नका लागी तेस्रो काँहु धरहरा महोत्सव
पोखरा, मंसिर २०
काहूँडाँडाको प्रबद्र्धन गर्नका लागि जनकल्याण क्लव र फूलबारी क्लवको आयोजनामा अर्को सातादेखि महोत्सव हुँदैछ । पर्यटकलाई बोलाएर स्थानीयको आर्थिक स्थितीमा सुधार ल्याउन महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ ।
२०६२ र २०६५ पछि तेश्रो संस्करणको महोत्सव मंसिर २८ देखि काहूँ धरहराको प्रांगणमा हुँदैछ । ‘पैसा कमाउनका लागि महोत्सव गर्न लागेको होइन । यो ठाउँको प्रचार गरेर पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ, महोत्सवका सहसंयोजक कुमार क्षेत्रीले भने–साउण्ड सिस्टम जडान हुँदैछ । झिलिमिली बत्ति हालेर यसपाली काहूडाँडाबाट पोखरालाई चकित पार्छौं ।’महोत्सवको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । करिब ५ सय परिवारलाई पारिवारिक पास र २ हजार हाराहारीमा टिकट विक्रि गरिसकेको क्षेत्रीले जानकारी दिए । महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनको विक्री र सांगितिक जमघट हुने उनी बताउँछन् ।
महोत्सवमा विभिन्न प्रयोजनका ८० वटा स्टल रहनेछन् भने अधिकांश स्टल बुकिङ भैसकेको प्रचारप्रसार संयोजक दामु आचार्यले बताए । महोत्सव प्रवेशका लागि ७० रुपैयाँको टिकट ब्यवस्था गरिएको छ भने सोही टिकटबाट धरहरा चढ्ने ब्यवस्था मिलाईएको आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार महोत्सवबाट ६० लाख आम्दानी हुने अनुमान छ । आम्दानीमध्ये ४३ लाख खर्च हुनेछ भने बचत रकम पूर्वाधार निर्माण र कोट ब्यवस्थापनमा लगानी हुनेछ । १० दिनसम्म चल्ने मेला अवधिभर ८० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान आयोजकको छ । मेलालाई एनएमवि बैंकले प्रायोजन गरेको छ ।
महोत्सवमा आउने पाहुनालाई खान र बस्ने ब्यवस्था होम स्टेमा हुनेछ । रानीपौवाबाट ८ किलोमिटर दुरिमा रहेको काहुँडाँडामा महोत्सव अवधिभर जुनसुकै बेला पनि मोटर आउजाउको ब्यवस्था मिलाईएको महोत्सवका संयोजक देवबहादुर गुरुङले बताए । ‘पहिले बाटो राम्रो थिएन । मोटरसाईकल पनि धकेलेर ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसैले २०६५ पछि हामीले महोत्सव गर्नै छा्डयौं, उनले भने–अहिले पक्की बाटो बनेको छ । आउजाउ गर्न कुनै समस्या छैन । डाँडामा पुगेर बास बस्ने चिन्ता पनि गर्नुपर्दैन । हामीले सबै ब्यवस्थापन मिलाएका छौं ।’
जाँच नदिने पास, दिएका फेल !
भारतमा भुकम्प, क्षतीबारे विवरण आउन बाँकी
प्रियंका चोपडाको फिल्म कसरी पाइन् जेनिशाले ?
विवाहमा ४० ग्रामभन्दा बढी सुन दिन नपाइने